Wuxuu ku beddelayaa Adobe Creative Suite barnaamijyo bilaash ah | Abuurista khadka tooska ah
Adobe Creative Suite waa mid ka mid ah baakadaha ugu fiican ee loogu talagalay xirfadlayaasha, laakiin sidoo kale waxay leedahay qiimo aad u sarreeya oo lagu bixiyo lacag. Haddii qofku heli karin inuu xoogaa haysto barnaamijyada ugu fiican ay soo bandhigtay xirmadan waxay ku badali kartaa qaar bilaash ah.
Hoos waxaad ka heli doontaa beddelka ugu fiican ee samaynta xirmo kuu gaar ah ama qaybta barnaamijyada ku beddeli kara Adobe Creative-kiisa qalab qaar sida Blender, GIMP ama Scribus. Waa inaan sidoo kale xusuusnaano in qalabkani aanu beddeli doonin Suite Hal abuur leh oo loogu talagalay xirfadleyda laakiin ay ku filan yihiin noocyada kale ee adeegsadayaasha aan u baahnayn wax badan.
1 GIMP si loogu badalo Photoshop
2 Waxaan ku beddelnay InDesign Scribus
3 Wixii Premiere ah ayaan u aadaynaa DaVinci Resolve
4 U beddelo Sawir Qaadaha Inkscape
5 Muujinta Webka 4 ama Aptana Studio ee loogu talagalay Dreamweaver
6 Kadib Saameyntiisa by Qase
7 Beddelista Flash ee Apache Flex
8 Ugu dambeyntii Acrobat oo lagu beddelay Preview ama PDF-XChange Viewer
GIMP si loogu badalo Photoshop
Markuu qofku raadsado beddel Photoshop, GIMP waa jawaabta ugu fiican. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu xun ee ku saabsan GIMP waxay ahayd isku xirkeeda, laakiin nuqulka 2.9 waxku wuu hagaagayaa wax badana jidaynayey waayo-aragnimo user si ay u kordhaan. Marka la soo koobo, waxay noqotay bedel wanaagsan oo loogu talagalay mid ka mid ah aaladaha ugu fiican Adobe Creative Suite.
Sidoo kale ma haysaa beddelaad kale sida Tafatiraha Pixlr (Windows), Rinjiyeynta (Windows) iyo jeeso
Waxaan ku beddelnay InDesign Scribus
Wixii ay tahay jaangooyooyin caadi ah oo loogu talagalay joornaalada ama joornaalada Scribus Waa il furan oo furan, waxayna sameyn kartaa ku dhowaad wax kasta oo InDesign ay qabato. Waxaa laga yaabaa inaysan ku soo bandhigin khibrada ugu fiican ee isticmaaleheeda iyada oo loo marayo isku xirkeeda, laakiin waa la mari karaa. Guud ahaan, in kasta oo aysan si fiican u xamili karin sawirro badan isla markaana aysan bixinayn fursado badan sida ay InDesign shaqadeeda u qabato si dhammaystiran.
Como beddelaad waxa ay tahay in la abuuro qaabka laga helo ebook aan hayno Sigil y Caliber.
Wixii Premiere ah ayaan u aadaynaa DaVinci Resolve
DaVinci Resolve dhawaan ayaa lagu daray awoodda wax ka beddelka. Inkasta oo nooca "Lite" uu leeyahay xulashooyin, hadana way inbadan kafiicanyihiin waxsoosaarka fiidiyowga ee 3840 × 2160, kaliya wuxuu u adeegsadaa GPU-ga processor-ka mana ogolaanayo sixitaanka la shaqeynta dadka kale. Inta soo hartay wuxuu la kulmaa dhamaan waxyaabaha aasaasiga u ah waxa tafatirka fiidiyowyada, maqalka iyo waxyaabo kaloo badan. Beddelka ugu fiican ee Adobe Premiere ama Final Cut.
Waxaad leedahay waxyaabo kale oo loogu talagalay Linux con Kdenlive, PiTiVi y OpenShotiyo Avidemux (Windows, Mac, Linux), xaakin (shabakadda) iyo Tifatiraha Muuqaalka ZS4 (Windows, Mac, Linux).
U beddelo Sawir Qaadaha Inkscape
Maxay yihiin vectors-ka aan hayno Inkscape sida barnaamij il furan oo sameeya wax kasta oo Sawir-qaade ka badan ama ka yar sameeyo. Inkscape wuxuu abuuraa sawir gacmeedyada vector wuxuuna qabtaa shaqo heer sare ah astaamo, astaamo, iyo qaabab aasaasi ah.
Waad isku dayi kartaa fursadaha kale sida uu Fur Isku Qaadista Furitaanka (Windows, Mac iyo Linux), Iskuxidh (Windows), XaraExtreme (Linux) ama Torapp (Chrome).
Muujinta Webka 4 ama Aptana Studio ee loogu talagalay Dreamweaver
In kasta oo uu yahay barnaamij gacantii Ilaahay ka tegey, waxaan u heli karnaa Microsoft's Expression Web 4 oo ah bedel weyn maxaa aasaasi ah. Waxaan sidoo kale haysannaa ikhtiyaar kale oo leh Aptana Studio 3 Waxaa lagu gartaa HTML5 iyo qaabka tafatirka-waqtiga-dhabta ah iyo xulashooyinka habayn ku filan oo la mid ah Dreamweaver.
Beddelka sida SeaMonkey (Mac), BlueGrifon (Windows, Mac, Linux) ama Amaya (Windows, Mac, Linux)
Kadib Saameyntiisa by Qase
Kadib Raadka waa barnaamij cajiib ah oo loogu talagalay ka shaqeynta fiidiyowga fiidiyowga iyo in lagu daro saameyn khaas ah oo gaar ah. Si loo beddelo waxaan ka heli karnaa qaar ka mid ah qalabkeeda DaVinci Resolve. Beddel kale ayaan haysannaa days oo leh xulashooyin loogu talagalay halabuur xitaa haddii ay tahay aalad loogu talagalay 3D, iyo iyada oo aan la iloobin Wax loogu talagalay Windows, inkasta oo ay xoogaa da 'tahay, waxay u hoggaansameysaa xulashooyinka xiisaha leh.
Beddelista Flash ee Apache Flex
Faafka Apache awooddo samee wax kasta oo badan oo Flash ah ha noqoto abuuritaanka barnaamijyada Flash ama xitaa desktop-ka. Waxay bixisaa taageerada ActionScript si wax kasta loogu soo gelin karo Flash.
Ugu dambeyntii Acrobat oo lagu beddelay Preview ama PDF-XChange Viewer
Muuqaalka PDF-XChange waxay noqon kartaa baddel xiiso leh Adobe Acrobat, oo leh a xirmooyinka ikhtiyaarrada bilaashka ah ee ku kooban akhriska, sharaxaad iyo saxiixyo. Isticmaalayaasha Mac ayaa dooran kara Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh inta badan abuuristaada PDF iyo baahiyaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Abuur qolal kale oo kuu gaar ah oo loo yaqaan 'Adobe Creative Suite' oo wata softiweer bilaash ah
@Ugo Yak mahadsanid! Waxaan ku darayaa maqaalka: =)
Scribus waa wax laga naxo, ma jecli isaga. Waxaa ka maqan sifooyin badan oo Indesign ay bixiso.
Ku jawaab hsoyuz
Yuusuf Avast dijo
Dhammaan si aad u wanaagsan oo qoraal ah iyo salaan xiiso leh oo ka timid Chile
Jawaab Jose Avast